यसरी बन्यो अन्तिम विकल्प ! - Naya Pusta
यसरी बन्यो अन्तिम विकल्प !
काठमाडौँ । बबी तामाङ, तेस्रो लिंगीः छोरो भएर जन्मे। हुर्कदै जाँदा छोराको भुमिका निर्वाह गर्न सकिनँ। सबै चाहना छोरीको जस्तो भयो। छोरीकै गर्न कपडा लगाउन थालेँ। छोरा मान्छे मन पर्न थाल्यो। घरपरिवार तथा समाजमा गिज्याउने पात्र बनाए।
यो पनि पढ्नुहोस् >> सुटकेसभित्र कोचेर यौनदासीका रुपमा ब्रिटिश मोडेलको तस्करी !
हेला र गलत दृष्टिकोणले हेर्न थाले । प्रकृतिले त्यस्तो बनायो, यसमा हाम्रो के दोष रु पढ्दै थिएँ, शिक्षक र साथीको हेलाले पढ्न छोड्नु पर्यो। भिभावकले गाली गरेर घरबाट निकाले। कहाँ जाने के गर्ने कसैले काम दिँदैन। सरकारले पनि वास्ता गरेन।
अनि अन्तिम विकलप बन्यो देहव्यापार। एक दुई हजार रुपैयाँका लागि चिसोमा बस्न कसलाई रहर लाग्छ र तर बाँच्नको लागि खान लाउन त पर्यो नि। काम गर्ने अवसर पाए गथ्र्यौँ। मौका पाउनेले गायक, मोडल, व्यवसाय बनेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् >>प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक, कुन दलकाे कति सीट ?
सरकारले पनि तेस्रो लिंगीका लागि केही सोच्नुपर्छ। आफैलाई बेचेर जीवन चलाउँदा नि सुख छैन । पुलिसे लैजान्छ, हप्ता दिन राखेर दसपन्त्र्र हजार धरौटीमा छोड्छ । फेर त्यो पैसा तिर्न सडकमै जानुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् >> डिभिजन टू : नेपाल ओमानसँग ६ विकेटले पराजित
सकारले केही व्यवस्था गरिदिए यौन पेसा त्याग्ने थिए। पत्रकार हामीसंग ग्राहक बनेर आउँछन्। हाम्रो कामका बारेमा यस्तो, उस्तो गर्छन, समाज विगार्छन् भनेर समाचार लेख्छन्। तर समस्या सकाधान के गरेर हुन्छ भनेर लेख्दैनन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने जिम्मेद्वारी प्रधानमन्त्री देउवालाई
यसरी हटाउनुहोस् अनुहारमा आएको कालोकोठी (विधिसहित)
८ महिनामा सवारी दुर्घटनामा परी कास्कीमा ४२ जनाको ज्यान गयो
भाइरल भइरहेको फोटोकी यी महिलाको वास्तविकताले तपाईलाई बनाउनेछ चकित !
बलात्कारी पक्राउ गर्दा स्थानीयको विरोध, चार राउण्ड हवाई फायर